Breaking:>> भर्खरै स्वास्थ्’यकर्मीस’हित २५ जनामा कोरोना देखिएपछी आजै रातीबाट १० दिनलाई निधेषाज्ञा घोषणा ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/Breaking:>> भर्खरै स्वास्थ्’यकर्मीस’हित २५ जनामा कोरोना देखिएपछी आजै रातीबाट १० दिनलाई निधेषाज्ञा घोषणा !
कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानका २५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा २५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। बिहीबार आएको रिपोर्ट अनुसार, स्वास्थ्यकर्मी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र सर्वसाधारणमा कोरोना देखिएको छ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, कपिलवस्तुका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत १३ जनामा कोरोना देखिएको हो। उनीहरुमध्ये ग्लोबल आईएमई बैंकका तीन जना, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एन्ड फाइनान्सका चार जना, मेगा बैंक र कृषि विकास बैंकका एकएक जना रहेका छन्। कालिका स्वाबलम्बन सामाजिक केन्द्रका तीन जनामा पनि कोरोना देखिएको छ।
कपिलवस्तु प्रशासनले १० दिनका लागि निधेषाज्ञा जारी गरेको छ। कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमै फैलिएर दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले १० दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। प्रशासनले बैंक तथा बित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुसहित संक्रमित बढ्न थालेपछि शुक्रबार बिहान ५ बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञा साउन ३२ गते राति १२ बजेसम्म लागू रहने छ।
अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सरकारी कार्यालय, बैंक तथा बित्तिय संस्था र सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन पुर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। निजी सवारीका हकमा भने मोटरसाइकल र स्कुटर जोरबिजोर प्रणालीका आधारमा सञ्‍चालन गर्न दिइने भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घ नारायण पौडेलको अध्यक्षतामा जिल्ला कोरोना विपद् ब्यवस्थापन समितिको प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ (३ ) तथा संक्रमण रोग ऐन २०२० को दफा २ बमोजिम सो निर्णय गरिएको प्रजिअ पौडेलले बताए। सजगता अपनाई संक्रमणको विस्तारलाई रोक्न सो निर्णय गरिएको उनले बताए। जिल्लामा बिहीबार साँझसम्म ८ सय ४० जना संक्रमित भेटिएका छन्। जसमध्ये ७ सय ५५ जना निको भई घर फर्किसकेका छन्।